क्यामेरामा आएर रोइन आस्था राउत, कमेन्टमा उल्टै दर्शकको गाली ! « MNTVONLINE.COM
क्यामेरामा आएर रोइन आस्था राउत, कमेन्टमा उल्टै दर्शकको गाली !
गायिका आस्था राउतको विमानस्थल काण्ड यतिबेला चर्चामा छ । उनले हतार भयो भन्दै कफी नै बोकेर सुरक्षा जाँचस्थल पार गर्न खोजपछि त्यहाँ रोक्ने क्रममा प्रहरीले तँ भनेर दुव्र्यवहार गरेको, आफ्नो हात समातेर न्याँक्न खोजेको उनले आरोप लगाएकी छिन् । यही आक्रोशमा आफुले प्रहरीको जरा सुधार गर्न सुझाव दिएको उनको स्पष्टीकरण छ । उनले करिब ३७ मिनेटको भिडियोमा स्पष्टीकरण दिएपनि महिला प्रहरीलाई डन्डा मुखबाट छिराएर अन्तैबाट निकालिदिन्छु भनेको के हो ? भन्ने खुलाएकी छैनन् । माफी मागेको नयाँ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस्
Satya Dudh ko Dudh Pani ko Pani 🙏🏼
Posted by Astha Raut on Friday, January 17, 2020
यसअघि आस्थाको विमानस्थलको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीले लिक गराइदिएको या भिडियोमा आस्थाले हतार गरेको देख्न सकिन्छ । उनले आफुले लिएर आएको कफी त्यहीँ छोडेर जान खोज्दा त्यो लिएर जान भन्दा उनी रिसाएकी छिन् । विमानस्थलमा कुनै सामान छोड्न मिल्दैन । अझ झोल पदार्थ र पाउडरहरु त छोड्नै मिल्दैन । त्यसमा के छ ? कस्तो छ ? त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? यहीकारण विमानस्थलभित्र जाँदा २० एमएलभन्दा बढी तरल पदार्थ लैजानै पाइँदैन । यस्तो २० एमएल तरल पदार्थ पनि सिल गरेर सुरक्षा अधिकारी समक्ष देखाउनुपर्ने हुन्छ । विदेश घुमेकी आस्थाल यति कुरा पनि नबुझको भनेर कमेन्टमा उनलाई गालीको वर्षा नै भएको छ ।